Xaaf oo Berri kusoo wajahan Muqdisho iyo isku soo baxii ugu weynaa oo la diyaarinayo - Caasimada Online
Home Warar Xaaf oo Berri kusoo wajahan Muqdisho iyo isku soo baxii ugu weynaa...
Xaaf oo Berri kusoo wajahan Muqdisho iyo isku soo baxii ugu weynaa oo la diyaarinayo
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ugu dambeyntii go’aansaday inuu Berri usoo duulo Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya si uu uga qeybgalo shirka uu madaxweynaha Soomaaliya iclaamiyey inay yeelaan doonaan Madaxda Maamul Goboleedyada iyo dowladda dhexe kadib Khilaaf soo if baxay.
Madaxweynaha Galmudug oo markii hore shaki weyn la gelinayey inuu ka qeybgalayo shirkaas ayaa ugu dambeyntii go’aan ku gaaray inuu kasoo qeybgalo kulankaas kadib markii ay isla hadleyn Dowladda Soomaaliya.
Madaweyne Xaaf ayaa maalin ka hor soo saaray warbixin xasaasi aheyd oo ku saabsaneyd inay dowladda Soomaaliya Magaalada Cadaado ka wado ololo cusub oo lagu doonayo in xilka looga qaado.
Xaaf ayaa xusay inaysan is qaadan karin inay dowladda dhexe shir ugu yeerto madaxda Maamul Goboleedyada iyo inay faragelin kusoo heyso Maamulkiisa.
Sida ay xogta ku heleyso Caasimadda Online, waxaa Magaalada Muqdisho ka socdo ololihii ugu weynaa oo lagu doonayo in lagu soo dhaweeyo Madaxweynaha Galmudug oo berri kasoo dagi doono garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Xogta ay heleyso Caasimadda Online ayaa sheegeyso in la diyaariyey ku dhawaad 8 Kun oo qof kuwaas oo soo xiran doono Funaanado ay ku qoran yihiin hal ku dhigyo ay kamid tahay (Galmudug faragelinta halaga daayo) (Xaaf Waa Madaxweynaha Sharciga ah ee Galmudug).
Isku soo baxaan lagu soo dhaweenayo Madaxweynaha Galmudug ayaa kasoo bilaaban doono gudaha Magaalada, iyadoo ugu dambeyn la isugu tagi doono garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde halkaas oo uu Madaxweynaha kula hadli doono dadka isku soo baxay.
Ugu Dambeyntii Madaxweynaha Galmudug ayaa ka qeyb geli doono Shirka Berri ka furmayo Muqdisho kaasoo ay yeelan doonaan madaxda Maamul Goboleedyada iyo dowladda dhexe, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu shirka dib ugu dhacay Maalinta Axadda ah.